Dell Inspiron 5391 Silver (i5-10th Gen)-3 ~ ICT.com.mm
HomeDell Inspiron 5391 Silver (i5-10th Gen)-3
Dell Inspiron 5391 Silver (i5-10th Gen)-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Intel® Core™ i5-10210U Processor 1.60 GHz (6MB Cache, up to 4.2 GHz) 13.3″ FHD (1920 x 1080) TrueLife with FP 8GB, onboard, LPDDR3, 2133MHz NVIDIA(R) GeForce(R) MX250 with 2GB... [Learn more]
Brand: DellFilter by: 13.3", 512GB SSD, 8GB RAM, Intel Core i5-10th Gen, KMD, NVIDIA GeForce MX 250 2GB, Silver, Ubuntu, USD, Windows Laptops
Intel® Core™ i5-10210U Processor 1.60 GHz (6MB Cache, up to 4.2 GHz)
13.3″ FHD (1920 x 1080) TrueLife with FP
NVIDIA(R) GeForce(R) MX250 with 2GB GDDR5
512GB M.2 PCle NVMe SSD
4 Cell Battery, 45Whr (Integrated)
Dell Inspiron 5391 က စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ Laptop တစ်လုံးကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ယူအသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ အရည်အသွေးမြင့် Laptop ကောင်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိဖို့အတွက် CPU အဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ် i5-10 th Gen Processor ကိုအသုံးပြုထားပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုတပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလုပ်တွေအမြန်ပြီးအောင် ကူညီပေးမဲ့ RAM 8GB (LPDDR3, 2133MHz) နဲ့ တွဲဖက်ပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက 13.3” ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုချင်သူတွေအကြိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် Resolution က Full HD ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည်လင်တောက်ပတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး TrueLife နည်းပညာကအလန်းစား ရုပ်ထွက်ကို ရရှိစေမှာပါ။ ဂရပ်ဖစ်အတွက် သီးသန့် Dedicated ဂရပ်ဖစ်ကတ်ဖြစ်တဲ့ NVIDIA(R) GeForce(R) MX250 (2GB GDDR5) ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် RAM နဲ့အသုံးပြုတဲ့အတွက် Laptop ရဲ့ မူလ RAM ကို အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PC Game တွေနဲ့ Media Editing ဆော့ဖ်ဝဲတွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Integrated ဂရပ်ဖစ်တွေထက် စွမ်းဆောင်ရည်(၃.၅) ဆ အထိ မြန်ဆန်နိုင်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ HDD ထက် အကြမ်းခံပြီးအသံဆူညံမှုနည်းပါးသလို ဒေတာ Speed ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ M.2 SSD 512GB ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် Window Loading က စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာမြင့်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ဆောင်ချက်တွေက လုံးဝမြန်ဆန်နေမှာပါ။ OS အဖြစ် Open Source OS ဖြစ်တဲ့ Ubuntu ကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး ဘတ္ထရီအတွက်ကိုတော့4Cell, 45WHr Battery ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင် ပါးလွှာတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံသစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီးလက်ဗွေနဲ့ စမတ်ကျကျ Login ဝင်ရောက်နိုင်စေမဲ့ Finger Print Reader လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ‘Silver’ နဲ့ ‘Ice Lilac’ အရောင်တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ စွမ်းရည်မြင့် Laptop လေးကိုစတိုင်ကျကျ သယ်ယူသွားနိုင်ဖို့ Dell Original Laptop အိတ်တစ်လုံးကို လက်ဆောင်ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Laptop နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုဖို့ Mouse တစ်လုံးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
10th Generation Intel® processors deliver incredible responsiveness and smooth, seamless multitasking.
Easily switch back and forth between open applications with up to 8GB LPDDR3 of memory. Store movies, photos and music with up to 512GB PCIe SSD storage. Opt for dual SSDs to amplify your storage capacity.
Enjoy the extra power and optimal everyday performance of optional NVIDIA® MX250 discrete graphics with up to 2GB GDDR5 vRAM.
Easily type under dim light, such as when you're on an evening flight or need to access your device in bed, with an Optional backlit keyboard.
Experience total integration with the fingerprint reader on the power button that allows you to log in withasingle touch.